Isimanga uMdumazi efisela uThuthani – AMABHINCA
Isimanga uMdumazi efisela uThuthani
Kudideke abaningi ngenkathi uMdumazi ephumela eshashalazini efisela lowo owaba nesandla ekudicileleni ikhono lakhe phansi ngonyaka ka 2018.
Kubikwa ukuthi umnumzane Thuthani Ndlovu useimeni esingesihle neze ngokwempilo njengoba ashawa istroke nje emasontweni edlule. Le nsizwa igula nje, yaba nokungezwani okukhulu noMdumazi ngesikhathi kuvumbuka izindaba ezithi uThuthani
walala nesinqanda mathe sikaMdumazi uThembelihle, nokuyinto eyamenza waba nyma nambana kozakwabo akagadlana nabo. UNjoko waze wakhipha ingoma ethi ‘Take away’ eyaduma umhlaba wonke wenza enkulu imali ngayo.
Kufikile ezindlebeni zikaMdumazi ukuthi le nsizwa yakwaNdlovu ayiphilile neze. Abaningi bebelindele ukuthi uzogiya ngethambo uMdumazi kodwa wavele wayifisela ukululama okuphuthumayo.
“Kuyangithusa ukubona abathandi bomculo wami nabantu abasohlangothini lwami befisela le nsizwa yakwaNldovu okubi ngegama lami. Kwesinye isikhathi sidinga ukubuka izinto ngeso lekusasa.
“Le nsizwa iwusizo kakhulu kozakwethu nasemndenini wayo nabantwana. Ngeke nakancane ngayifisela okubi ngoba ngiyazi ukuthi baningi kanjani abayidingayo”.
“Yebo sibe nakho ukungezwani emnyakeni edlule kodwa lokho ngeke kwangenza ukuthi ngimfisele ukungalulami ngoba ngiyazi ukuthi umhlaba wonke ubheke yena”.
“Ngithi lulama nsizwa yakithi ubuyele emsebenzini wakho baningi abafowethu abakubhekile, kanti nomndeni wakho ulindele lukhulu kuwe”. Kubeka uMdumazi.
Previous Previous post: Jaiva Zimnike Khanyeza eMsamo
Next Next post: Corona single track by Maskandi artists